Mon, Jul 6, 2020 at 4:58am
३ वर्षदेखि कामै नगर्दा पनि पतिभन्दा ७ गुणा धनी छिन् विपाशा, कति छ उनीहरुको सम्पत्ति ?
मुम्बइ, १६ असोज बलिउडकी अभिनेत्री विपाशा बसु पछिल्लो पटक २०१५ मा रिलिज भएको फिल्म अलोनमा देखिएकी थिइन् । यो फिल्ममा उनको अपोजिट रोलमा उनकै पति करण सिंह ग्रोवर थिए । २०१६ मा यी दुईले विवाह गरे । करण बलिउडमा विपाशाभन्दा पनि सिनियर हुन् । तर, अनुभव र सम्पत्तिको कुरामा भने विपाशा करणभन्दा निकै अगाडि छिन् । विपाशाको सम्पत्ति पति करणको भन्दा ७..
ठाडोभाका गीत गाउने भेडीखर्के साइँलाको शालिक अनावरण
बेँसीशहर, १५ असोज ठाडोभाका शिरोमणि स्व भेडीखर्के साइँला (दीर्घनाथ अधिकारी) को अर्धकदको शालिक अनावरण गरिएको छ । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–६, मा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरमा उनको शालिक अनावरण गरिएको हो । आइतबार राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीपकुमार राई ‘ब्याकुल माइँला’ले स्व साइलाको शालिकको अनावरण गरे । अनावरण गर्दै उनले ठाडोभाका संरक्षणमा साइँलाको उच्च योगदान रहेको बताए । रु दुई लाख ५० हजारको लागतमा अर्धकदको..
नागिनबाट चर्चित बनेकी मौनी रोयको हट फोटो शूट, हेर्नुहोस् यि तस्वीरहरु :
एजेन्सी, १४ असोज नागिनबाट चर्चित बनेकी मौनी रोय आजभोली ग्रीषमा विदा मनाइरहेकी छन् । उनको फिल्म गोल्ड सफल भएपछि उनको हौसला निकै बढेको छ । मौनी रायले ग्रीषमा प्राकृतिक सुन्दरताको निकै मजा लिइरहेकी छन् । उनका त्यहाँकेही तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भायरल भएका छन् । हेरौ यी तस्वीर । ..
सबैभन्दा धेरै कमाउने १० बलिउड फिल्म, कुनले कति कमाए !
एजेन्सी, १२ असोज भारतीय फिल्महरुले अहिले सय करोडको कमाइ सामान्य बन्न थालेको छ । यस्ता केही भारतीय फिल्मबारे हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं जसले सबैभन्दा धेरै कमाइ गरेको छ । १ बाहुबली–२ - सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने फिल्मको सूचीको एक नम्बरमा आउँछ बाहुबली–२ द कन्क्लजन । बाहुबली २ हेर्नका लागि फ्यानहरु निकै उत्साही थिए । किनी बाहुबली जो पहिला रिलिज भएको थियो..
१६ देखी २८ वर्षका युवायुवती समुहको मिष्टर एण्ड मिस नेपाल आइकन आयोजना हुँदै
काठमाडौँ, १० असोज बाटिका इन्टरटेन्मेण्टको आयोजनामा मिष्टर एण्ड मिस नेपालआइकन २०१८ हुने भएको छ । देशैभरीका बिभिन्न कलेजमा अध्ययनरत १६ बर्ष देखि २८ बर्ष उमेर समूहका यूवायूवतीहरुले प्रतियोगीतामा प्रतिस्पर्घा गर्न सक्नेछन् । शनिबार हाडिगाउँ स्थित धन्वन्तरी स्पोर्टसमा प्रथम चरणको अडिसन सम्पन्न भएको छ । करीब १७ जना प्रतियोगीबाट ३ जना पुरुष र ५ जनामहिला गरी जम्मा ८ जना प्रतियोगी छनौट भएका छन्..
थोरै चलचित्रमा अभिनय गरेर चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल साम्राज्ञी कालो पहिरनमा
काठमाडौँ, ९ असोज अनमोल केसीसँगको चलचित्र ड्रिम्सबाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेकी साम्राज्ञीको चर्चा विभिन्न कारणले भइरहेको हुन्छ । थोरै मात्र चलचित्रमा अभिनय गरेर पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल अभिनेत्रीमा पर्छिन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । उनी काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा कालो पहिरनमा देखिइन् । कालो पहिरनमा उनी निकै खुलेकी थिइन् । प्रायः कार्यक्रममा साथमा रहने उनकी आमा यो पटक भने साथमा थिइनन्..
मुस्ताङ, ८ असोज थासाङ गाउँपालिका–१ टुकुचेकी अपेक्षा थकालीले मिस मुस्ताङ २०७५ को ताज पहिरीएकी छिन् । थाक खेलकूद तथा सांस्कृतिक विकास सङ्घले आयोजना गरेको मिस मुस्ताङ प्रतियोगितामा सहभागी अन्य आठ जना प्रतियोगीलाई पछि पार्दै योगेन्द्र माविको कक्षा १२ मा अध्ययनरत १६ वर्षीया अपेक्षाले आइतबार ताज पहिरिएकी हुन् । भविष्यमा अभिनय र भलिबल खेलाडी बन्ने योजना बनाएकी अपेक्षाले मिस मुस्ताङको ताजसहित प्रमाणपत्र र..
१००अौँ जन्मदिन मनाउँदै राष्ट्रकवि घिमिरे - राष्ट्रपतिबाट जन्मदिनको शुभकामना
काठमाडौँ, ७ असोज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १०० वर्ष प्रवेश गरेका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई लैनचौरस्थित घिमिरे निवासमा आईतबार बिहान पुग्नु भइ जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन् । माधवप्रसाद घिमिरेले भने ‘म सय वर्ष बाँचेकै जनताको आशीर्वाद र मायाले हो । सबैको मायाले झन् जवान भएको अनुभूति भइरहेको छ ।’ राष्ट्रकवि घिमिरेकी धर्मपत्नी महाकाली भोलि ८४ लाग्दैछिन् । ‘आफ्नी जीवनसंगिनीको ८४ को पूजा खाने भाग्यमानी श्रीमान्..
काठमाडाै, ६ असोज चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–३’ असोज २४ गते घटस्थापनाको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण समूहले चलचित्रको झलक (ट्रेलर) र प्रदर्शन मिति एकैसाथ सार्वजनिक गरेको हो । “प्रदर्शन मितिमा तनाब थियो, शुक्रबार साँझ मात्रै मिति तय गरियो”, मुख्य कलाकार दीपकराज गिरीले भने, “आशा छ चलचित्रले दर्शकको राम्रो माया पाउँछ ।” उन असोज २४ गते घटस्थापनाबाट ‘छक्कापञ्जा ३’..
बाटिका इन्टरटेन्मेण्ट प्रा.लि.को आयोजनामा मिष्टर एण्ड मिस नेपाल आइकन २०१८ आयोजना हुँदै
काठमाडौँ, ४ असोज बाटिका इन्टरटेन्मेण्ट प्रा.लि.को आयोजनामा मिष्टर एण्ड मिस नेपाल आइकन २०१८ हुने भएको छ। देशैभरीका बिभिन्न कलेजमा अध्ययनरत १६ वर्षदेखि २८ वर्ष उमेर समूहका यूवा यूवतीहरुले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्घा गर्न सक्नेछन् । गत शनिबार हाडिगाउ स्थित धन्वन्तरी स्पोर्टसमा प्रथम चरणको अडिसन सम्पन्न भयो। करीब १७ जना प्रतियोगीबाट ३ जना पुरुष र ५ जना महिला गरी जम्मा ८ जना प्रतियोगी छनौट भएका छन्। अडिसनमा..
काठमाडौँ, ३ असोज नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले राष्ट्रिय अन्तरिक्ष चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीले अन्तरिक्षको भाव झल्कने चित्र बनाई सोसाइटीको वेबसाइटमा राखिएको आवेदन फाराम भरेर पठाउनुपर्ने छ । चित्र यही असोज १ गतेदेखि १५ सम्म सोसाइटीको वेबसाइटमा पठाइसक्नुपर्ने अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए । विद्यार्थीले पठाएका चित्रमध्ये निर्णायकबाट २० वटा छनोट गरेर ‘अनलाइन भोटिङ’ का..
वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको पार्किन्सस रोगको सफल शल्यक्रिया, स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौँ, २ असोज वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको पार्किन्सस रोगको सफल शल्यक्रियापछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठको बिहीबार सो रोगको शल्यक्रिया गरिएको उल्लेख छ । शल्यक्रिया डा रेशा श्रेष्ठ र डा वसन्त पन्तले गरेका थियो । कलाकार श्रेष्ठमा नौ वर्षदेखि सो रोगको लक्षण देखा परेपछि चार वर्षदेखि दिमागको दाहिनेतर्फको भागमा बढी समस्या भएकोले..
बलिउड सुपरस्टार गोविन्दाको नेपाली कति मिठो वा...व - [भिडियोसहित]
काठमाडौँ, ३१ भदौ बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा शनिबार नेपाल आएका हुन् । बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा आइतबार काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘एलजी फिल्म अवार्ड’ वितरण समारोहमा सहभागी हुन छोरीका साथ शनिबार काठमाडौं आएका हुन् । उनको नेपाल बसाई ३ दिनको हुनेछ। उनी छोरी टिना आहुजालाई साथ लिएर शनिवार बिहान साढे १० बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। अवार्ड समारोहमा उनले वरिष्ठ फिल्म निर्देशक किशोर रानालाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट..
हिमालय कला महोत्सव सम्पन्न, १५ लाख बराबरका विभिन्न चित्र बिक्री
काठमाडौँ, ३० भदौ दोस्रो हिमालय कला महोत्सवमा करीब रु १५ लाख बराबरका विभिन्न चित्र बिक्री भएका छन् । काष्ठमण्डप आर्टस समूहले नेपाल कला परिषद्मा यही भदौ २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गरेको उक्त महोत्सवमा विभिन्न ११ चित्र बिक्री भएका छन् । प्रदर्शनीमा १३५ कलाकारका करीब २०० सिर्जना प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । वरिष्ठ कलाकार शशीविक्रम शाह, मदन चित्रकार, कृष्ण मानन्धर, शशीकला तिवारी, वर्षगोपाल वैद्यलगायतले..
पत्रकारको प्रश्न नै गलत भन्दै साम्राज्ञीको यस्तो जवाफ - न अनमोल, न प्रदीप ! मलाई कोही चाहिदैन
एजेन्सी, २९ भदौ नेपाली चलचित्रक्षेत्रकी चल्तीकी अभिनेत्री हुन् अभिनेत्री सा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । चलचित्र कायरा छायंकनका लागि फिलिपिन्समा रहदा टट्याटु काण्डका कारण बिवादमा मुछिन थालेकी साम्रा पछिल्लो समय विवादमा धेरै फसेकी छिन् । हुनत, अशोक शर्मा निर्देशित जय भाोलेको अफर रिजेक्ट गरेपछि साम्राज्ञीलाई दर्शकहरुले गाली गर्न थाले ।गाउंले भुमिका भएको भन्दै साम्राज्ञीले उक्त चलचित्र छाडेको हल्ला चल्यो । र, उनलाई..
फेरी जेल जान सक्छन् सलमान खान, उनि अभिनित फिल्म 'लवरात्री' बिबादमा
एजेन्सी, २८ भदौ बलिउड नायक सलमान खान पछील्लो समय निक्कै बिवादमा फसिरहेका छन् । प्राय उनी बिरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको समाचार प्रकाशित भइरहेको हुन्छ । बिहारको मुज्जफुर अदालतले उनको फिल्म लवरात्रीका विरुद्ध परेको एक निवेदनमाथि प्रारम्भीक कारबाही गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । सलमान खानसहित अन्य ७ जना कलाकारमाथि कानुनी कारबाही हुन लागेको हो । मुद्दा दर्ता मात्र हैन एक संगठनका प्रमुखले..
हिन्दू नेपाली महिलाहरुको ठूलो पर्व 'तिज'को दिन पशुपतिमा जे–देखियो (१२ तस्बिर)
काठमाडौं, २७ भदौ बुधबार हिन्दू नेपाली महिलाहरुको ठूलो पर्व तीज । महिलाहरुले विहानैदेखि भोको बसेर भगवान शिवको पूजाअर्चना गर्छन् । ब्रत बसेर भगवान शिवको पूजा गरेमा विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायूको लागि र अविवाहितले आफूले चाहेजस्तो वर पाउने मान्यता रहेको छ । त्यसैले काठमाडौंका शिव मन्दिरहरुमा ब्रतालु महिलाहरुको घुइँचो लागेको छ । सबैभन्दा ठूलो भीड पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको छ । यहाँ ब्रत बसेर पूजा..
बिहे गरेपछि विपाशा बसुको चलचित्रमा पुर्नागमन, खेल्दैछिन् यो चलचित्र ...
एजेन्सी, २६ भदौ करणसँग बिहे गरेपछि विपाशा बसुलाई दर्शकले नयाँ फिल्ममा हेर्न पाएका छैनन् । तर अब भने उनी फिल्म वो कौन थीको रिमेकमा देखिने भएकी छन् । भारतिय मिडियाका अनुसार पहिला यो फिल्मका लागि ऐश्वर्या रायलाई अफर गरिएको थियो । तर, उनीसँग कुरा नमिलेपछि विपाशासमक्ष कुरा पुगेको छ । विपाशा उक्त फिल्ममा अभिनय गर्न तयार भएको बताइएको छ । राज खोसलाले..
नायक जीवन लुइँटेलको आज जन्मदिन, यतिबेला अमेरिकामा
काठमाडौँ, २५ भदौ कुनै नेपाली फिल्ममा सफल अभिनय गरेका नायक जीवन लुइँटेलको आज जन्मदिन परेको छ । सन् १९८१ सेप्टेम्बर १० तारिखका दिन मोरङको हरैचामा जन्मेका लुइटेलयतिबेला अमेरिकामा रहेका छन् । सन् २००२ का मिस्टर नेपाल लुइँटेल २००७ देखि सिनेमा संसारमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसअघि उनी मोडलिङमा व्यस्त थिए । सन् २००७ मा उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र तिर्खा हो ।..
अवार्ड समारोहमा प्रियंकाले लगाइन् महंगो ड्रेस, ५ दिन बैंकक् घुमेर फर्किन
एजेन्सी, २४ भदौ प्रियंका चोपडा हालै न्यूयोर्क फेशन विकका क्रममा भएको डेलि फ्रन्ट रो मिडिया फेशन अवार्डसमा पुगिन् । कार्यक्रमका केही फोटोहरु सामाजिक संजालमा आएका छन् जसमा प्रियंका निकै सुन्दर दखिएकी छिन् । सबैभन्दा बढी चर्चामा छ प्रियंकाले लगाएको ड्रेस जो उनले इभेन्टका क्रममा लगाएकी थिइन् । जबकि मुम्बइबाट बैंकक टुरको प्याकेज दिने कम्पनीले ५५ हजारमा ४ दिन र ४ रातको प्याकेज..
स्‍व‍िमिंग पूलमा फोटो शुट गराई रहेकी यि मोडलको भयो यस्तो हाल ... (फोटो फिचर)
एजेन्सी, २१ भदौ हलिउडकी धेरै राम्री एक्‍ट्रेस सलमा हायक यस्तो काण्ड भयो जुन देखेर तपाईंलाई नि निक्कै हासो लाग्ने छ । हेर्नुस् न तस्बिरमा तस्बिर आँफै बोली रहेको छ । सलमा हायेक स्‍व‍िमिंग पूलमा फोटो शुट गराई रहेकी थिइन् । त्यो समय के भयो उनी आफ्नो ड्रेसका कारण निक्कै शर्माएकी छिन् । फोटोशूटको दौरानमा 48 वर्षीया हायेक स्वीमिंग पूलबाट भिजेको लुगामा ड्रेसको..
एजेन्सी, २० भदौ बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत एक मात्र त्यस्ती नायिका हुन् जो स्क्रिप्ट चेन्ज गर्ने देखि लिएर परी आए निर्देशन समेतको जिम्मेवारी सम्हालने आँट गर्दछिन् । खान नायकहरुसँग स्क्रिन शेयर गर्न मरीहत्ते गर्ने नायिकाहरुको बिचमा कंगना खान नायकहरुको फिल्ममा काम गर्न इन्कार गर्ने गर्छीन । कंगना भन्छिन् खान नायकहरुसँग नायिकालाई शो पिसको रुपमा मात्र राखिन्छ नकि अभिनयको लागि । यस्तैमा हालै..
टाइगरकी प्रेमिका दिशा पटानी हट अबतारमा, तस्विर बने भाइरल
काठमाडौं, १९ भदौ टाइगरको प्रेममा रहेका कारण चर्चामा आएकी दिशा पटानी अहिले भने हट तस्विरका कारण चर्चामा आएकी हुन् । बलिउडमा पछिल्लो समय चर्चित अभिनेत्रीमा पर्छिन् दिशा पटानी । उनले हालै आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा केही फोटो पोस्ट गरिन् । जुन फोटोहरूले अहिले बलिउड गर्माएको छ । आफ्नो फिगर दुरुस्तै राख्नका लागि कडा मिहिनेत गर्ने गरेकी दिशा फोटोमा निकै हट देखिएकी छिन् । यतिबेला उनी..
बलिउडमा करियर बनाउन ऐश्वर्य राय यि निर्देशकसँग सुतेको सनसनीपूर्ण खुलासा !
काठमाडौँ, १८ भदौ बलिउडमा करियर बनाउनु एकदमै कठिन कुरा हो । जो कसैको बहसको कुरा होइन् । बलिउडमा करिअर बनाउन कि एकदमै कडा मेहनत गर्न पर्छ कि त गलत तरिकाको बाटो अपनाउनु पर्छ । अभिनेत्री आफ्नो करिअर बनाउनका लागी कुनै न कुनै न कुरामा सम्झौता गर्न पर्छ ।यदि कुनै नायिकाको जीबन राम्रोसँग अघि बढेन भने उनीहरु कुनै सम्झौता गर्न पछि हट्दैनन् । यहा..
यि नायिकाले १ अर्ब ५० लाख पारिश्रमिक लिन्छिन्, तर एकाएक किन लिईन् त सन्यास ?
एजेन्सी, १७ भदौ २१ वर्षको उमेरमा सन् १९९४ मा फिल्म ‘द मास्क’बाट हलिउडमा डेब्यु गरेकी हलिउड अभिनेत्री क्यामरन डियाजले सबै भन्दा बढी पारिश्रमिक लिने गर्थिन् । उनको सबै जसो फिल्म पनि हिट हुने गर्थे । उनले निजी जीवन बिताउन नपाएको भन्दै सन्यास लिएकी हुन् । फिल्मका साथै उनी प्रेमसम्बन्धका कारण पनि चर्चामा आएकी थिइन् । उनले सन् २०१५ मा संगीतकार बेन्जी मेडनसँग..
पिताको मृत्युपछि जुनियर एनटिआरले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन्, कसले दियो दागबत्ती ?
हैदराबाद, १६ भदौ दक्षिण भारतीय सुपरस्टार दाजुभाइ जुनियर एनटिआर र नन्दमुरी कल्याण रामका पिता नन्दमुरी हरिकृष्णको बुधबार सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो । हरिकृष्णको अन्तिम यात्रा बिहीबार साँझ ४ बजे हैदराबादको जुबली हिल्स्थित घरबाट निकालियो । पिताको अन्तिम संस्कारको क्रममा कान्छा छोरा जुनियर एनटिआरले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन् । एनटिआरको आँसु रोकिँदै रोकिएनन् । त्यहाँ भएका आफन्तले उनलाई सम्हालिरहेका थिए । जुनियर एनटिआर यतिसम्म..
आमिरको ‘महाभारत’मा प्रभासलाई अफर, फिल्म निर्माण हुन १० देखि १५ वर्ष लाग्ने
एजेन्सी, भदौ १५ बलिउड अभिनेता आमिर खान आफ्नो महत्वाकांक्षी फिल्म ‘महाभारत’ को तयारीमा जुटेका छन् । यो फिल्म उनले रिलाइन्स कम्पनीका मालिक मुकेश अम्बानीसँग मिलेर बनाउन लागेका हुन् । ३ भागमा बन्ने फिल्मका लागि मुकेशले १ हजार करोड भारु लगानी गर्ने तय भएको छ । यस विषयमा दुई पक्षबीच हालै सम्झौता भएको बुझिएको छ । सम्झौताअनुसार आमिरले मुनाफाको ७० प्रतिशत लिने..
वरिष्ठ कलाकार रिमालको निधन, प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त
काठमाडौँ, १५ भदौ वरिष्ठ कलाकार एवं रेडियो नेपालका पहिलो गायक तथा नाट्य धरोहर हरिप्रसाद रिमालको ९२ वर्षको उमेरमा बिहिबार बिहान उनकै निवासमा निधन भएको छ । रिमालको पार्थिव शरीरलाई अहिले अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित निवासमा राखिएको र आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने चलचित्र निर्देशक सम्राट सापकोटाले जानकारी दिए । नाटककार स्व बालकृष्ण समको मुकुन्द इन्दिरामा १४ वर्षको उमेरमा अभिनय शुरु गरेका रिमालले..
नुवाकोटका अनन्तराम केसीले लामो वक्तव्य दिएर विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल
काठमाडौँ, १५ भदौ नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–१ का अनन्तराम केसीले ९० घण्टा दुई मिनेट निरन्तर वक्तव्य दिएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । भदौ ११ गते बिहान ६ बजेदेखि निरन्तर वक्तव्य दिएका उनले बिहीबार मध्यरातसम्म निरन्तर वक्तव्य दिएर सो किर्तिमान कायम गरेका हुन् । केसीले भारत केरेलाका केपी भाल साराजानले ८१ घण्टा १६ मिनेट बोलेर कायम गरेका विश्व कीर्तिमानलाई समेत तोडेका छन् । न्यू..
काठमाडौँ, १३ भदौ सबैभन्दा लामो समयसम्म बोलेर विश्व कीर्तिमान बनाउने तयारीमा जुटेका अनन्तराम केसीले निरन्तर ५३ घण्टादेखि बोलीहेका छन् । केसीको अभियान गोकर्णेश्वर–५, जोरपाटीस्थित इस्ट पोल माविमा सोमबार बिहान ६ बजेदेखि शुरु भएको हो । बुधबार बिहान ११ बजेसम्मको अभिलेखअनुसार उनले ५३ घण्टा बोली सकेका अभियानको संयोजन गरिरहेकाका न्यू माइन्ड्स एकेडेमीका अध्यक्ष कुमारराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिरे । अध्यात्मको खोजबाट मनोशक्तिको अभ्यासमा लागेका..
Results 913: You are at page 21 of 31